Swedish akwụkwọ ego | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Swedish akwụkwọ ego RSS
The Swedish Ego
The Swedish akwụkwọ ego(krona) siworo mkpụrụ ego nke Sweden ebe ọ bụ na 1873. Ọ na-enyere site na Swedish mba akụ, Sveriges Riksbank. Na Bekee, mkpụrụ ego na-infrequently zoro aka dị ka Swedish okpueze (Krona pụtara okpueze na Swedish). One Krona na-subdivided n'ime 100 penny. Ka o sina dị, niile ore mkpụrụ ego A kwụsịtụrụ dị ka nke September 30, 2010. Products ka na-eme atụmatụ na ore, Otú ọ dị, mgbe akwụ ụgwọ na ego nile aggregates na-agbazi ka ezigbo ndị Krona. Mkpụrụ ego nri ugbu a maka ojiji na- 1 krona, na 5 na 10 okpueze. Banknotes na ige 20, 50, 100, na 500 okpueze.
Sweden mezuru ihe bara uru n'ụzọ ndụ, n'ihi ọnụ mbepụ onwe enterprise, sara mbara na-elekọta mmadụ uru, onye dị elu dissemination kpuchie, na a ukwuu nkà ọrụ ike. The aku na uba na ike nsogbu ka n'èzí mgbanwe, eji ihe akpan owo isi nke osisi, hydro ike, na ígwè ịnweta. The zuru ụwa ọnụ ego mberede nke 2008 ebelata ụgbọ mmasị na itinye n'ọrụ, -eweta banyere Swedish aku na uba slide n'ime ichighaazu n'agbanyeghị ya siri ike ego na isi dị mkpa. Solid ike trades atụkwasịkwara a siri ike ibiaghachi azụ ke afọ 2010 ka 2011.
The Swedish akwụkwọ ego e gosiri na 1873, supplanting ndị Riksdalersgatan. The ego e gosiri dị ka ihe ikpeazụ nke Scandinavian Monetary Union na Norway na Denmark, nke wee na-aga ruo mgbe Agha Ụwa Mbụ. Monetary iche-iche n'okpuru kwe ọnụ ahịa ndị dị n'okpuru nke kacha mma mma larịị. The Monetary Union okụrede njali elu-elu nke Agha Ụwa Mbụ na 1914. Sweden nyefere ndị kasị mma larịị on August 2, 1914, na-enweghị ihe gbanwere swapping ọnụ ọgụgụ n'otu bịarute na njedebe.
site kwe ọnụ ahịa, Sweden a chọrọ isonyere Eurozone na ndị Juu tọghatara tinye n'ọrụ Euro. -Abụ na dị ka ọ nwere ike, kasị Swedes na-emegide inata coin.On September 14, 2003, iri ise na isii pasent nke Ntuli Aka na-ekiri si jụrụ inata Euro. -Emegbu ụzọ mgbapụ nkebiahiri, ndị ọchịchị nke Sweden ẹmende na na na iso ERM II, a prekondishion ka inata Euro.